3d drawing - futebol online psg,online roulette wheel for money,Fitaovana famenoana lalina ao anatiny, Fitaovam-piasana lalina feno - Deshen
Email: jennifer.pang@betway signtar.cn
Masinina fanamorana milina lalina
Masinina mpamono basy mampitony
Milina fanamoriana basy Mirco
Masinina mpamono basy CNC tokana
Masinina fanodinana basy CNC roa
Mivarotra mpandefitra basy CNC efatra
3 Môtôsôka Aostika lalina fanentanana
3 Axis CNC Moto Haute Gun Drilling Machine
Mitambatra BTA Sy Fitaovam-basy mitam-basy
BTA Deep Drole sy Belling Machine
T2120G BTA Fanaka-menaka lalina sy milina fanosorana
T2250A BTA Fanaka-menaka lalina sy milina fanosorana
TK2125 BTA Fanaka-menaka lalina sy milina fanosorana
TK2180 T2250A BTA Fampivoarana lalina sy milina fanosotra
Boribory boribory navadibadika fanamainam-bolo feno
Milina fihodinana basy lalina Hole Gun
Dingana fanondroana basy fanaingoana
Bush Drill Bush Ary mitari-dalana
Olana sy famahana
Masinina mpamaky basy tokana / avo / efatra
Sehatra fandefasana: 1mm-40mm
Fanamorana ny fandefasana: hatramin'ny 4000mm
Ny fampidinana sy ny fandefasana automatique dia misy
fampiharana:Fitaovana ara-pitsaboana, Automobile, aerospace, bobongolo ary maty, fitaovana hydraulic, miaramila, sns
Horonan-tsary misimisy kokoa,
tsidiho azafady ny Youtube
Fifehezana CNC: X, Y, Z axis dia mifehy ny CNC
Fampandrenesana:3mm-100mm (rafitra mitambatra sy basy mandefitra basy)
Fanamorana ny fandefasana:hatramin'ny 3000mm
Rafi-piasana milina: Ny fanodinana basy sy ny bàlan'ny fanamoriana bàlan'ny fanodinana BTA dia azo atao
fampiharana: Izy io dia manana ny fiasan'ny manidina mahitsy lavaka, mitongilana lavaka, jamba lefitra ary loaka dingana.
Ampiasaina amina fiara, indostrian'ny moto, indostria lasantsy, indostrian'ny tafika, indostrian'ny aerospace, vatana valve hydraulic, akora amin'ny fitaovam-piadiana ary faritra hafa amin'ny fanodinana lavaka kely.
Fitrandrahana mivaingana: 20mm-150mm
Mahasosotra / mandoro: 20mm-800mm
Ity milina ity dia milina manokana ho an'ny famonosana cylindrical deep hole, izay mety ho an'ny drill sy mankarary ny halalin'ny lavaka cylindrical lalina. Mandritra ny fanodinana, ny mode BTA dia ampiharina, izany hoe, manome ny solika ny feon-tsolika, ary ny fanapahana dia esorina avy ao anaty ny fantsona drill mankany amin'ny siny amin'ny fantsom-bavoka amin'ny faran'ny fandriana amin'ny alàlan'ny faritra fanapahana. Rehefa mankarary dia arakaraka ny faran'ny bara mankarary ny menaka, ary ny tsipika dia arotsaka amin'ny fantsom-bolan'ny fanesorana eo amin'ny lohan'ny masinina amin'ny alàlan'ny faritra foy.
Famonoana basy tsy azo zahana: 11.5mm-50mm
drôna basy:3mm - 45mm
kapila mipoaka mahery vaika:1mm hatramin'ny 12mm
Mandefa baomba ny BTA:17mm-160mm
Niorina tamin'ny taona 2017 i Shandong Deshen Machine Manufacturing Co, Ltd, miorina ao Dezhou, Shandong, China. Izy dia orinasa rahavavin'ny Dezhou Drillstar Cutting Tool Co., Ltd. (www.betway signtarcuttingtool.com). Deshen dia orinasa matihanina miasa amin'ny serivisy varotra, fanamboarana ary teknika amin'ny milina fanamorana lavaka lalina, fitaovana famafana ary fitaovana hafa, ary koa ny serivisy fanodinana avo lenta.
Foiben'ny ao amin'ny tanàna Dezhou, Faritanin'i Shandong, ny faritry ny serivisy dia manarona an'i Shina sy Azia Atsimo Atsinanana, Moyen Orient, Amerika Atsimo, Eropa ary faritra hafa. Ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny aerospace, ny hery nokleary, ny herin'ny rivotra, ny famokarana milina, ny fanamboarana fiara, ny fitaovana ara-pitsaboana, ny fananganana varotra vita amin'ny marika, ny indostria ary ny indostrian'ny solika, ny miaramila ary ny sisa. Ny orinasa dia mandray ny fangatahan'ny mpanjifa ho tanjona ary “serivisy serivisy, fanavaozana ara-tsiansa ary teknolojia” ho toy ny orinasa; teknolojia kilasy voalohany, kalitao kilasy voalohany sy serivisy kilasy voalohany dia fanoloran-tena maharitra sy fikatsahana an'i Deshen.
fruit machine gambling
Lalina ny BTA
Ny fitaovana sy ny fitaovana Pilot dia azo ampidirina ao anaty rindranasa iray hanafoana ny roa-telo avy eo amin'ny lavaka iray. Ny fampiasana fitaovana vita amin'ny dingana iray dia mampihena be ny fotoana fihodinan'ny fihodinana, ny fikapohana ary ny eccentricity eo anelanelan'ny diametra. FAMPISEHOANA ATSIM-PIVAROTANA Ny fametrahana betway sign dia misy fetran'ny famokarana miankina amin'ny sakeliny avo lenta amin'ny dingana. Ny fivoaran'ny karbida manokana dia mety ilaina indraindray noho ny toerana misy ny lavaka mangatsiatsiaka. Ankoatr'izay, ny takelaka boribory dia mety takiana noho ny tsy fahampian'ny zoro anatiny ao ...
Ny fandriana milina sy ny lalamby fitarihana dia atsipy ao anaty vatana iray, ary ny fandriana milina dia voatsabo amin'ny fahanterana voajanahary nandritra ny roa taona mahery mba hahazoana antoka ny fampandehanana ny masinina Fanomezana fototra: fanafarana avy any Eropa, Amerika, Japon ary Taiwan. Omron NC na Agent vaovao CNC Agent: Iscar deep hole drill series blade gun drill Model Deep hole drilling machine DS2-25mm Capacity Drilling diameter 2-16mm Ny halalin'ny borehole tokana 650mm Famaranana lehibe indrindra ...
Môtô mitoto basy telo famonoana no ampiasaina amin'ny famahana ny lavaka mandrindra amin'ny asa. Izy io dia afaka mitsonika ny lavaka mahitsy, loaka fisintonana, amin'ny alàlan'ny lavaka, loaka jamba ary ny lavaka dingana. Misy axis enina servo enina amin'ilay milina: X axis drive job move amin'ny horizontally, roller linear guide rail. Ny fifehezana CNC. Ny hetsika fanamandoana Yaxis dia mihetsika amin'ny lalamby mihazakazaka, roller linear. Ny fifehezana CNC. Mijanona mandanjalanja. Z axis drive drive tool infeeding, roller linear guide rail, CNC control. W axis: Mifehy ny elanelan'ny andry ts ...
Ny orinasa anay dia mamolavola ny milina fanam-bavony telo axis mitambatra, izay mety handefitra ny rafi-pandrefesana sy ny fandefasana baomba BTA, izay hihaona amin'ny fangatahana fanamorana ny lavaka be an'ny orinasa sasany. Fomba fohy momba ny milina: Fomba fanaovana barazy sy ny fanodinana BTA famonoana basy Gundrilling φ10-φ30mm BTA fandefasana φ25-φ80mm Fandrindran'ny fantsom-bolo lalina 500mm / 1000mm / 1500mm / 2000mm / 2500mm / 3000mm CNC mifehy SIEMENS / FANUC / KND / GSK X axis CNC mifehy sy mizotra. fivoka: 500mm / 1000mm / 1500mm / 2000m ...
Fototry ny milina: sakam-basy mitam-basy Φ3 ～ Φ20mm / Φ3 ～ Φ30mm / Φ6 ～ Φ40mm Ny halavam-pandrefesana lava indrindra 500/1000/1500/2000/2500 mm Holo ny halavam-pandrefesana lava sy ny savaivony 100: 1 ny faritra OD asa Φ15 ～ Φ100mm Fomba fanaovam-bolo avo roa heny, mety tsara. ho an'ny asa shaft na boribory. Sintona: ampandehano ny asa mihodina, ny hafainganam-pandeha 117r / min CNC contrôleur system SIEMENS / FANUC / GSK Guide rail manaiky ny lalàm-panoratana CNC fanaraha-maso rafitra SIEMENS / FANUC / GSK milina misy marika: Model Z ...
Ny dingana sy ny fitaovana Pilot dia mety ampidirina ao anaty ...
list of most watched football leagues in the world
Ny fandriana milina sy ny lalamby mpitarika dia atsipy ...
Manamboatra karazana fantsona BTA tokana izahay ...
Fitaovana basy azo ampiasaina azo ampiasaina ...
Shandong Deshen Machine Manufacturing Co., Lt ...
latest results of english premier league
Milina fanoratana sy famonosam-boto lalina an'ny BTA ...
Milina telo miady Axis gun Dezhou Deshen ...
CNC Gun Machine Drilling Shandong Deshen Machin ...
Taorian'ny famokarana 2 volana dia nosedraina sy nosedraina ny ZK21006, ny fandeferana sy ny fahatsentsenan'ny lozisialy an-tanana dia natsangan'ny mpanjifa. Ankehitriny dia vonona handefa ny mpanjifa izy ireo. No. Ny filazalazana Parameter 1 Hole savaivony ny sakana Φ1-Φ6mm 2 Ny halavan'ny masira Max Z） 100mm ...
14 ka hatramin'ny 16 Oktobra 2019, nanatrika ny fiovam-pialan'ny Qingdao ny fampirantiana angovo vaovao sy antitra kinetika ny Dezhou Drillstar Cutting Tool Co, Ltd. Nanomboka tamin'ny 14 ka hatramin'ny 16 Oktobra 2019, nandray anjara tamin'ny Qingdao New Ener ...
betwinner 1xbetbetwinner bonusblackjack online.bonus dafabetcasino gurucasumocasumo betcasumo casino slotscasumo onlinecasumo paypalcricbuzz score